Gaa na obodo Bologna na Italytali, ihe ị ga-ahụ | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Bologna, Obodo, General, Italia
Bologna bụ obodo na-abụghị otu n'ime ndị kasị njegharị na Italy. Asọmpi a dị oke mma, mana ebe ọ bụ obodo ebe otu n'ime mahadum kacha ochie na Europe, ọ na-aghọ ebe ụmụ akwụkwọ si n'akụkụ ụwa niile na-agakarị, ndị nwere ike ịkọ ihe niile enwere ike ịhụ n'obodo a mara mma.
La obodo nke bologna Amara ya maka uzo ya na ulo elu ya, mana a makwa ya dika 'Dotta, the Rossa e la Grassa', ma obu ndi mutara, Red na Fat. Ndị Mụtara maka mahadum ya, ọbara ọbara maka agba nke elu ụlọ ya, na abụba maka ama nri ya. Ya mere, anyị ga-ahụ ihe niile masịrị obodo Bologna na Itali.
1 Otu esi aga Bologna
2 Ihe ị ga-eri na Bologna
3 Isi square
4 Ogige Santo Stefano
5 Basilica nke San Petronio
6 Lọ elu Bologna
7 Ebe nsọ nke Nwanyị Nwanyị San Luca
8 Picturelọ Osise Mba
Otu esi aga Bologna
Obodo Bologna nwere ọdụ ụgbọ elu nke ya, ọ bụ ezie na site na Spain anyị ga-agarịrị nke ka ukwuu dị ka Fiumicino na Rome wee si ebe ahụ nweta njikọ obere ọdụ ụgbọ elu a. Site na ọdụ ụgbọ elu enwere ihe dị ka kilomita isii na etiti nke enwere ike iji bọs ma ọ bụ tagzi. Na Bologna nwekwara ọdụ ụgbọ oloko ebe ụgbọ oloko si ebe ndị ọzọ dị ka Rome ma ọ bụ Milan na-abata, yabụ ọ bụkwa ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na anyị rutere na nke ọ bụla n'ime obodo ndị a site na ụgbọ elu ma chọọ ijikọ Bologna.
Ihe ị ga-eri na Bologna
Ọ bụrụ na pasta na-amasị gị, ị kwesịrị ịma na ama Pasta Bolognese Ọ hapụrụ ebe a, dị ka aha na-egosi. Ọ bụ ezie na a na-ejikarị spaghetti maka efere a, na Bologna, a na-eji noodles eme ihe, nke na-adịkarị, na Bolognese ihendori nke tomato na anụ. Nri nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu ka ị nụrụ ụtọ n'otu ụlọ oriri na ọ restaurantụ cuụ na Bologna.
La Piazza Maggiore Ọ bụ ebe etiti obodo ahụ, nke na-aga n'ihu na-echekwa otu ọdịdị ahụ ọ mere na narị afọ nke XNUMX. Ihe amara a nke obodo echekwara nke na-agwakọta nke ọhụrụ na nke ọdịnala bụ ihe na-eweta ọtụtụ amara na nleta Bologna. N'ebe a ka anyị ga-ahụ isi iyi Neptune a ma ama, yana akụkụ ya atọ, nke bụ akara ngosi obodo ahụ. N'ebe a, anyị ga-ahụ ọtụtụ isi ụlọ na ihe ncheta nke obodo ahụ, yabụ ọ bụ ebe mmalite dị mma. N'ime ya anyị hụrụ Basilica nke San Petronio, Palazzo dei Tonai ma ọ bụ Palazzo del Podestà.
Ogige Santo Stefano
N'akụkụ a ka Chọọchị Santo Stefano, bụ́ nke nwere ọchịchọ ịmata ụlọ ụka asaa. Nke a bụ n'ihi na ụlọ ahụ bụ ihe owuwu nwere ụlọ asaa dị iche iche. N'ime anyị na-achọta mmasi ọzọ, nke ahụ bụ na ọ na-arụpụta ụzọ akụkụ atọ nke ahụ Jizọs Kraịst wepụtara site na mpempe akwụkwọ dị nsọ. Ogige a mara mma nke ọma n'abalị, mgbe ọ na-enwu gbaa ma ị nwere ike ịga ije na arcades ya, ka anyị ghara ichefu na amaara obodo a maka ha.
Basilica nke San Petronio
Nke a ga-abụ ụka kasị ukwuu na Krisendọm mana ọ na-apụta na ọ ka agwụchabeghị. O mechara bụrụ ụka nke isii kachasị na Europe na nke atọ na Italytali, nke bụrịrị ihe. N'ime ya mara mma karịa karịa n'èzí, nke na-enye ọdịdị ahụ agwụbeghị. Na mgbakwunye, ekwesiri iburu n'uche na ị nweghị ike ịbanye na akpa azụ ma ha enweghị oghere akpa aka ekpe na ya.
Lọ elu Bologna
Na obodo a ka ọ bịara nwee ihe karịrị ụlọ elu 100, ya mere amaara ha na owuwu ụzọ mbata ya. Taa, e nwere ụlọ elu 24 fọdụrụnụ, bụ ndị a maara nke ọma dịka ụlọ elu abụọ ahụ, Torre degli Asinelli na Garisenda. I nwere ike ịrị Asinelli naanị iji hụ obodo ahụ site n'elu. Ihe na-adịghị mma bụ na e nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nzọụkwụ 500 na-enweghị ebuli, ya mere ọ bụ naanị maka ndị dị njikere ime mgbalị ahụ.
Ebe nsọ nke Nwanyị Nwanyị San Luca
Na colle della Guardia, otu ugwu gbara obodo Bologna gburugburu, bụ ebe nsọ nke Nwanyị Nwanyị anyị nke San Luca, bụ nke otu ugwu rutere 666 ụta nke juputara na ndi mmadu oge nile. N'ime anyị nwere ike ịchọta akara ngosi na-egosi Madonna na nwatakịrị site na narị afọ nke iri na abụọ ma ọ bụ XNUMX, n'okpuru nke enwere Madonna ọzọ. Na Satọdee tupu ụbọchị ise nke ise mgbe Ista gasịrị, a na-eme njem nsọ iji sọpụrụ ihe oyiyi a.
Picturelọ Osise Mba
Ọ bụ ezie na ọ dị na Bologna ma ọ bụghị obodo kachasị njem, Pinacoteca a bụ otu n'ime ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị mkpa na withtali na ọrụ ndị ha bidoro na narị afọ nke iri na atọ na ndị nka dika Raffaello ma ọ bụ Carracci. Ọ na-emepe site na Tuesday ruo Sọnde site na 9: 00 ruo 19: 00 pm ma ọ bụ nleta dị mkpa maka ndị hụrụ nka n'anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gaa na obodo nke Bologna na Italy, ihe ịhụ
Izere okpomoku nke Lisbon, rue osimiri!